Why So Serious Over A Mere Flag | Lionslayer : The Legend
Why So Serious Over A Mere Flag
ဒီနေ့ ဖေ့ဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ တတိန်တိန်နဲ့ လူတိုင်းကိုယ်စီ နီကုန်ကြသည် ဖြစ်နေလို့ ဘာပါလိမ့်လို့ စပ်စုကြည့်လိုက်တော့ ဪ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံကို အသစ်ပြောင်းတဲ့ နေ့ဆိုပါကလား။ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့ ငယ်ငယ်က အလံလေးကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ကြလို့ နှမြောတသ ဖြစ်နေကြလည်း ဒီအလံက ၂၀ဝ၇-၂၀ဝ၈ လောက်ကတည်းက အလံသစ်အဖြစ် အတည်ပြုပြီးဖြစ်နေတာ သိကြတာမို့ သိပ်ပြီးတော့လည်း ထူးပြီး မဆန်းတော့ပါဘူး။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံဟောင်းဟာ တစ်ချိန်က ဦးနေဝင်းတို့ ဇွတ်မှဇွတ်ပဲဆိုပြီး အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေအရ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ အလံမို့လို့ ထူးပြီး နှမြောစရာ မရှိ။
အဲဒါနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလံဟောင်းတွေ အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာ နည်းနည်း လျှောက်မွှေကြည့်လိုက်တော့ ဒီလိုထွက်လာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို မွန်တို့အုပ်စိုးစဉ်က အလံ (1300-1500)
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးအလံ (၁၉၃၀-၁၉၄၂)
ဗြိတိသျှလက်အောက်ခံ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရ မြန်မာပြည်နယ် အလံ (၁၉၃၉)
ဂျပန်လက်အောက်ခံ မြန်မာပြည်နယ်အလံ (၁၉၄၂-၁၉၄၈)
လွတ်လပ်ရေးရသည်မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးနေဝင်း အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသည်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအလံ
၁၉၇၄ နောက်ပိုင်းမှ ၂၀၁၀ အထိ သုံးသည့်အလံ
၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလိုက်သည့်အလံ
ညောင်ပင်က ဘုရားငုတ်တိုကို မြိုထားတာ ကြည့်ပြီးတော့ ဟယ်အရွက်လေးက စိမ်းလာပြီ၊ ဟယ်အရွက်လေးက ဝါသွားပြီလို့ တအံတဩ ငေးမောနေပါဦးမယ်ဆိုရင်လည်း လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုးပေမို့ သဘောရှိ ကရောဟိတော့ဗျား။
တချို့က အရင်အလံဟာ ကြယ် ၁၄ လုံးပါတာမို့ ပြည်နယ်ခုနစ်ခု တိုင်းခုနစ်ခုကို ဖော်ပြတာဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ပိုကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ အဲဒီတော့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။ မြန်မာနိုင်ငံရယ်လို့ စဖြစ်လာတော့ ပြည်နယ် ၅ ခုရှိပြီး ဗမာပြည်နယ်ဟာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသ (Region) ဆိုတာ ပြည်နယ်ထဲက ခရိုင်ထက် ပိုကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်တိုင်းဟာ လွှတ်တော်မှာ မဲနေရာ အညီအမျှ ရကြပါတယ်။
၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေအရ တိုင်း(Region → Division)တွေကို ပြည်နယ်တွေနဲ့ တန်းတူလုပ်ပစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ဗမာပြည်နယ်ဟာ လွှတ်တော်မှာ အမတ်နေရာ ၇ ဆတက်သွားပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အလိုလို ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရဖို့၊ ညီတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာ ဤခရီးမနီးပါ လို့သာ ကလေးတုန်းကလို ရွတ်နေရဦးမှာပါပဲ။
Tags: flag, Myanmar, people
7 Responses to “Why So Serious Over A Mere Flag”
ကြယ် ၁၄ လုံးဖြစ်လာတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ၆ မဲ က ရှုံးပြီးသားလိုဖြစ်နေတယ် . . .
အခုက ဘာမှ ကိုယ်စားပြုတာကို မပါတော့တာ
အခုဟာထက် စာရင် အရင်ဟာ ပိုကောင်းတယ်
အဲဒါထက် စာရင် ဟိုးအရင်ကဟာ ပိုကောင်းတယ်
နောက်ဆက်သွားရင် ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ နေရတာ ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပေါ်လာတယ်လေ
ပြည်ထောင်စုရယ်လို့ ဖော်ညွှန်းရင် ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြုတာပါသင့်ပါတယ်။ ဒီကြယ်တစ်လုံးက ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
“There has been no official explanation as to what these elements symbolize” Wikipedia.
အလံအသစ်ကြီးက ဘာမှန်းလဲမသိဘူးဆိုလို့ အွန်လိုင်းမှာ လိုက်ရှာကြည့်တာ။ ဘယ်မှာမှ မတွေ့။ နောက်ဆုံး ဝီကီမှာ ဒါလေးပဲ ရလိုက်တယ်။ 😛
ေၾသာ္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနၾကတာပဲေလ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ
ဒီညီမွ်ျခင္းအတိုင္းသာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳတာ မပါေတာ့ဘူးထင္တယ္
ဟယ် အရွက်ကလေးက ဝါသွားပြီ၊ စိမ်းသွားပြီလို ပြောနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုပိုကြီးထွားလာတဲ့ ညောင်ပင်ကိုကြည့်ပြီး အင်း.. စိမ်းလာပြီ။
ဟာ.. သွားပါပြီ၊ ဝါသွားပြီ၊ မရတော့ဘူး ဆိုပြီး ပြောနေကြတာ ထင်တာပဲ။
အရင်အရင့်အလံကို မမီလိုက်ကြတော့လည်း မွေးကတည်းမြင်လာတဲ့အလံလေးကို တင်ကြတာပေါ့။
အဓိကက အလံရုပ်ဆိုးတာ၊ လှတာ၊ ပြောင်းလိုက်တာ၊ မပြောင်းလိုက်တာထက် ငါတို့တော့ ထင်တိုင်းကြဲခံနေရတယ်၊ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြတဲ့အမှတ်အသားပဲ ထင်ပါတယ်။
ဘာမှမလုပ်ရဲ၊ မလုပ်နိုင်တော့လည်း ပြလို့ရတဲ့နေရာက ပြတာပေါ့။
ဆောရီး ကွန်းမန့်က စပန်းထဲဝင်သွားလို့ မမငြ်လိုက်ဘူး။ အခုမှတွေ့လို့ ဖုန်ခါပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။
LeaveaReply to mmsurfer